Koox Caan ah oo dooneysa Ciyaaryahan Raheem Sterling - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Koox Caan ah oo dooneysa Ciyaaryahan Raheem Sterling
Koox Caan ah oo dooneysa Ciyaaryahan Raheem Sterling
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay isku dayi doonto inay lasoo wareegto ciyaaryahanka Manchester City Raheem Sterling inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
25-sano jirka ayaa markale qaab ciyaareed cajiib ah ku heysta kooxda heysata horyaalka Ingariiska inta lagu guda jiro ololahaan 2019-20, isagoo dhaliyay 20 gool isla markaana caawiye ka noqday 7 kale 39 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Xiddiga heerka caalami ee dalka England ayaa qandaraas kula jooga kooxda ka dhisan Etihad Stadium wuxuu socan doonaa illaa iyo Juun 2023, laakiin waxaa jiray soo jeedinno uu ku eegi karo inuu u dhaqaaqo xagaagan haddii laga dhabeeyo ganaaxa laba xilli ciyaareed laga saaray Champions League ah.
Sida ay sheegayaan wararka ka imanaya Spain, Madrid ayaa isha ku haysa horumarka ciyaaryahanka City, kooxda Zinedine Zidane ayaa ka fiirsan doonta inay xagaaga u dhaqaaqdo Sterling hadii fursadaas kooxda ganaaxa si rasmi ah loo saaro
Da ‘yarkii hore ee Liverpool ayaan wax gpool a ka dhalin horyaalka sanadkaan 2020 laakiin wuxuu ku fiicnaa Champions League, isagoo dhaliyay shan gool isla markaana caawiyay afar kale 7 kulan oo uu saftay.
Manchester United ayaa sidoo kale dhawaan lala xiriiriyay ciyaaryahanka reer England.
Previous articleKulankii Maanta ee Aqalka Sare oo khilaaf u baaqday
Next articleJubbaland oo Jawaab rasmi ah kasoo saartay Qoraalkii Villa Soomaaliya